Itoobiya oo beenisay inay qaar Ciidamadeeda ka mida ay Soomaaliya kala baxday | Xaysimo
Home War Itoobiya oo beenisay inay qaar Ciidamadeeda ka mida ay Soomaaliya kala baxday
Itoobiya oo beenisay inay qaar Ciidamadeeda ka mida ay Soomaaliya kala baxday
Dowladda Itoobiya ayaa markii u horeysay ka hadashay in ciidamadeeda ku sugan Soomaaliya ay kala baxeen gobolka Gedo, sida ay horaantii bishan ay qoreen qaar saxaafada ka mid ah.
Jamaaludiin ayaa ku dooday in ciidamadooda ku sugan gobolada Soomaaliya ay sahaydooda ka qaataan howlgalka ay ka tirsan yihiin ee AMISOM, balse ay u doontaan Doolow, sida uu sheegay.
Safiirka ayaa sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyey in dhawaan lasoo afjari doono howlgalka millateri ee dowladda federaalka Itoobiya ka wado gobolka Tigreyga, isagoona carabka ku adkeeyay in cadaalada la marsiin doono hogaanka TPLF.
Hadalka Safiirka ayaa imanaya xili ay horaantii bishan xubno ka tirsan maamulka gobolka Gedo oo codsaday inaan la magacaabin ay sheegen in qaar ka mid ah ciidanka Ethiopia ee aan ka tirsaneyn AMISOM ay ka baxeen gobolka.
Sidoo kale qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa xaqiijiyey inay arkeen ciidankan oo ka gudbaya xuduudda gobolka Gedo uu la wadaago Itoobiya.